Global Voices teny Malagasy » Nihamahery vaika ny herisetran’ny polisin’i Hong Kong: mpanao fihetsiketsehana voatifitra akaiky · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 14 Novambra 2019 18:28 GMT 1	 · Mpanoratra Hong Kong Free Press Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fanoherana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Cupid Producer tao amin'ny HKFP.
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia fitetezana ireo andian-tatitra nosoratan'ny mpandray anjara maro ao amin'ny sehatra famoaham-baovao antserasera Hong Kong Free Press tao anatin'ny daty samy hafa. Tafiditra ao anatin'izany: Kris Cheng ao amin'ny 11 of November  sy ny 9 of November , Holmes Chan sy Jennifer Creery ao amin'ny 9 of November  ary i Holmes Chan ao amin'ny 9 of November . Navoaka tato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty. Tianay ny mampitandrina ny mpamaky fa ahitana votoaty mahatohina maromaro ny lahatsary amin'ity lahatsoratra ity.
Very ny lazan'ny polisin'i Hong Kong, izay matetika jerena ho ny azo itokisana indrindra ao amin'ny faritra noho ny fipongara'ireo trangan-kerisetra maro sy fanitsakitsahany ny lalànany ihany, raha miditra amin'ny volana fahavalo amin'ny hetsika fanoherana ny politikan'ny governemanta mampiondrika ny zo demaokratika i Hong Kong.
Tamin'ny 11 Novambra, nisy polisin'i Hong Kong iray misahana ny fifamoivoizana nitifitra in-telo tamin'ny mpanao fihetsiketsehana roa tsy mitam-piadiana tao amin'ny distrika iray miorina ao atsinanan'ny nosy Hong Kong ny maraimbe nandritra ny hetsika fitokonana manerana ny tanàna.
Nanao barazy tamin'ny lalana fivoahana amin'ny garan-dalamby tao Sai Wan Ho ny mpanao fihetsiketsehana. Tokony ho tamin'ny 7 sy fahefany maraina teo, nisy polisy iray niezaka ny hihaza ireo mpanao fihetsiiketsehana, avy eo izy namoaka ny basy poleta fitondrany miasa ary nanambana izany tamin'ireo olona, araka ny sary azon'ny Cupid Producer. Avy eo izy nisambotra mpanao fihetsiketsehana iray miakanjo fotsy, ary nitifitra akaiky ny mpanao fihetsiketsehana iray miakanjo mainty.
Ny fitifirana mpanao fihetsiketsehana tsy mitam-piadiana
Nisy mpanao fihetsiektsehana iray miakanjo mainty avy eo nivoaka ary niezaka ny hisambotra ny basin'ilay manampahefana, raha mbola nitifitra in-droa io.
Nahitana ra nijininika tamin'ny tany raha tsy afa-nihetsika intsony ny anankiroa. Hita ho mbola àry saina ny iray noho ny namaliany rehefa nanontaniana ny anarany izy. Tsy namaly kosa ilay mpanao fihetsiketsehana iray.
Nifamaly tamin'ny polisy ny mpandalo teo avy eo ary nitifitra dipoavatra ny polisy. Niezaka ny hanatona ilay mpanao fihetsiketzsehana torana ny vehivavy iray, saingy notolomin'ny polisy misahana ny rotaka iray izy.
Nalain'ny ambilansy ireo mpanao fihetsiketsehana roa ireo avy eo.
Niezaka ny hanapaka ny fifamoivoizana maraina manerana an'i Hong Kong ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny alatsinainy 11 Novambra ho ampahany amin'ny kinasa hanetsehana ny olona hanao fitokonambe. Nisy ny fisamborana manerana an'i Hong Kong, aoanatin'izany ny tao Tuen Mun, Wong Tai Sin ary Sha Tin. Tapaka ny tolotra metrô (MTR ) tamin'ny ankamaroan'ireo zotra lehibe, tafiditra amin'izany ny zotra Kwun Tong, zotra Tung Chung, ny zotran-dalamby atsinanana, ary ny zotra Ma On Shan. Tratran'izany ihany koa ny zotran-dalamby tsotra.
Nihamafy ny hetsi-panoherana taorian'ny nahafatesan'ny mpianatra oniversite iray
Nanao voady ny hanamafy ny tolona ny mpanao fihetsiketsehana taorian'ny nahafatesan'i Alex Chow Tsz-lok 22 taona, izay lavo noho ny ratra nahazo azy raha nianjera avy amin'ny rihana voalohany tamin'ny fiantsonan'ny fiara izy. Raha mbola manjavozavo ny fahafatesan'i Chow, nanao hetsika fanaparitahana ny olona ny polisy misahana ny rotaka teo akaiky teo tamin'ny fotoana nianjerany tamin'ny 3 novambra tokony ho tamin'ny iray maraina.
Saripika: May James/HKFP.
Maro tamin'ny mpiasan'ny fitsaboana no naneho hevitra fa mampiahiahy ny ratra nahazo an'i Chow satria tamin'ny lohany sy ny hatony ny nisy ireo fahatapatahan'ny taolana rehetra. Dokotera iray mpandidy loha no nino  fa mety ho efa tsy nahatsiaro tena i Chow tamin'ny fianjerany satria efa-metatra monja ny haavon'ny fianjerany, ary ny fitsambikinana ao anatin'ny fahatsiarovantena dia tototokony hahatonga ny fahatapahan'ny taolana amin'ny tanany sy ny tongony raha amin'ny toe-draharaha mitovy amin'izany.
Tamin'ny 9 Novambra, olona an'arivony no nivory teo ivelan'ny foiben-toeran'ny governemanta mba hisaona amin'ny fahafatesan'i Chow. Nasehon-dry zareo ny finoan-dry zareo fa ny governemanta sy ny polisy misahana ny rotaka no tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesany. Mpiasam-birao iray 40 taona no niteny tamin'ny HKFP  nandritra ny fiaretan-tory (fandrehetan-dabozia):
Tsy tokony ho nitranga izao. Te-hahafantatra ny marina aho. Na dia miezaka ny miteny aza ny polisy fa tsy misy idirany ny amin'io dia tsy mino izany aho, tsy ho voavidin'izany aho (hafa ny filaza azy amin'ny teny anglisy). Tena very tanteraka ny fitokisana azy ireo.
Filazana ho fisian'ny fanolanana tambabe nataon'olona efatra tao amin'ny tobin'ny polisy
Nitombo ny fahatafintohinana raha sambany nahare ny vahoaka fa nisy fanolanana tambabe tao amin'ny tobin'ny polisy taoTsuen Wan tamin'ny septambra. Nanamarina ny polisy fa naharay fitarainana  ry zareo tamin'ny 22 oktobra, saingy nilaza fa tsy mpifandraika amin'ny vokatry ny fanadihadiana (famotorana) ny filazana tahaka izany.
Nivoaka an-tserasera aloha tamin'ny voalohany ny antsipirihan'ny fanolanana tambabe, ary avy eo narahana sy navoakan'ny Apple Daily news . Vehivavy 18 taona izay nanao fanalan-jaza tamin'ny 5 novambra tao amin'ny Hopitaly Mpanjakavavy Elizabeta no lazaina ho lasibatra tamin'izany.
Araka ny tatitra, nosakanana ilay vehivavy raha nandeha an-tongotra akaikin'ny tobin'ny polisy ao amin'ny distrikan'i Tsuen Wan tamin'ny tapaky ny volana Septambra. Na dia tsy nanao akanjo mainty aza izy (saiky manao akanjo mainty ny ankamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana hanehoany nyfijeriny ara-politika) sady tsy nanao hetsika fanoherana, dia nolazaina ho nampidirina tao amin'ny toby izy ary nanaovan'olona efatra misarontava angaredona fanolanana.
Nilaza ny tatitry ny Apple Daily fa nahitana soritra fahakiviana lalina teo amin'ilay vehivavy taorian'ny zava-nitranga, ary nisalasala izy tamin'ny voalohany ny hametraka fitoriana tao amin'ny polisy. Nahita izy avy eo fa bevohoka taorian'ny fandehanana tany amin'ny hopitaly tamin'ny tapaky ny volana Oktobra, ary niteny tamin'ny mpiasan'ny fitsaboana ny zavatra nihatra taminy raha niaraka tamin'ny reniny.
Nisy pejy Facebook iray, HA secrets , tantanin'ny mpiasan'ny hopitalim-bahoaka nanaporitsaka fa efa nangonina ny ADN ho porofo hamantarana ny nahavanondoza.
tamin'ny 26 Oktobra – efatra andro taorian'ny nanamarihana ny toe-javatra tao amin'ny polisy – mpitondratenin'ny polisy no nilaza fa “tsy naharay fitarainana fanafihana ara-pananahana” tao amin'ny Foibe San Uk Ling Holding, toerana iray misaraka izay vao nahenoana sahoan-dresaka amin'ny fanararaotana gadra. Tamin'io fotoana io, Tsy nilaza ny polisy raha naharay fitarainana heloka ara-pananahana mifandraika amin'ny tobin'ny polisy ao Tsuen Wan Police na toeran'ny polisy hafa.
Manampahaizana iraisampirenena niantso ny hanaovana fanadihadiana mahaleo tena fitarainana ao amin'ny polisy
Ny fitsapan-kevitra no naneho fa tsy matoky ny polisy ny ankamaroan'ny vahoaka ao Hong Kong  ary nitaky ny hanaovana famotorana mahaleo tena amin'ny fampiasana hery tafahoatra ataon'ny polisy.
Iray amin'ireo dimy mpikambana ao amin'ny vaomieran'ny manampahaizana manokana iraisampirenena vao natsangana tamin'ny septambra hanampy ny IPCC amin'ny famakafakana ara-dohahevitra amin'ny hetsi-panoherana ny Profesora Clifford Stott, Sojaben'ny Fakiolten'ny Fikarohana ZavaBoary ao amin'ny Oniversiten'i Keele ao United Kingdom.
Tamin'ny 9 Novambra, niteny mafy i Cliff Stott, iray amin'ireo dimy mpikambana ao amin'ny vaomieran'ny manampahaizana manokana iraisampirenena ho an'ny Filaknevitra Fitarainana Mahaleotena ao amin'ny Polisy (IPCC) Hong Kong ary natsangana hanampy ny IPPC. Namoaka fanambaràna izy tao amin'ny Twitter nilaza fa tsy ampy fahefana ny fomba fiasa amin'izao fotoana izao eo ambany fahefan'ny IPCC, ary nandrisika izy hisian'ny fanadihadiana midadasika kokoa ataon'ny vondrona mahaleotena iray ary manana ny fahefana ilaina amin'izany :
Ny Vaomieran'ny manampahaizana manokana iraisampirenena hanmakafaka ny Filankevitry ny Fitarainana Mahaleotena ao amin'ny Polisy amin'ny fikorontanana no manao fehinteny filàna fanamafisana ny fahefan'ny IPCC, izay raha atrehana dia mety hamela ny Famakafakana ara-dohahevitra ataony hampisy fanerena amin'ny dingana manaraka
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/11/14/144649/
 11 of November: https://www.hongkongfp.com/2019/11/11/breaking-hong-kong-police-shoot-protester-live-round-sai-wan-ho/
 9 of November: https://www.hongkongfp.com/2019/11/09/hong-kong-police-call-coroner-investigation-students-death-university-president-demands-explanation-ambulance-delay/
 9 of November: https://www.hongkongfp.com/2019/11/09/i-want-know-truth-thousands-mourn-death-hong-kong-student-vigil/
 9 of November: https://www.hongkongfp.com/2019/11/09/woman-files-complaint-hong-kong-police-alleged-rape-station/
 Apple Daily news: https://hk.news.appledaily.com/local/realtime/article/20191109/60247665
 no naneho fa tsy matoky ny polisy ny ankamaroan'ny vahoaka ao Hong Kong: https://globalvoices.org/2019/11/09/surveys-show-majority-of-hong-kong-people-have-lost-trust-in-the-citys-police-force/
 fanadihadiana midadasika kokoa ataon'ny vondrona mahaleotena iray ary manana ny fahefana ilaina amin'izany: https://www.hongkongfp.com/2019/11/10/hong-kong-police-watchdog-lacks-power-investigate-ongoing-protests-says-intl-experts/